Horudhac: Real Sociedad vs Barcelona… (Blaugrana oo eegeysa inay gaarto guusheedii sidddeedaad oo xiriir ah) – Gool FM
(Sociedad) 14 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa eegeysa inay gaarto guusheedii siddeedaad oo xiriir ah tartammada oo dhan marka ay u safrayaan naadiga Real Sociedad maqribnimada maanta oo Sabti ah kulan ka tirsan horyaalka La Liga.
Catalan ayaa haatan hoggaanka horyaalka ku haysa 34-dhibcood inkastoo ay dhibcahaas la wadaagaan Real Madrid oo booska labaad ku jirta, halka Sociedad ay fadhiso booska afaraad kaddib markii ay 27-dhibcood uruursatay 16-keedii kulan ee ugu horreeyey oo ay ciyaartay xilli ciyaareedkan 2019-20.
Garsooraha: Antonio Alberola Rojas (Spain)
Garoonka: Reale Arena
Ciyaaryahanka kooxda Real Sociedad Joseba Zaldua ayaa dib u soo laabanaya kaddib ganaax uu kaga maqnaa kooxda martida loo yahay, waxaana uu ku soo bilaaban karaa booska garabka midig ee daafaca.
Robin Le Normand ayaa garoomada kaga maqnaanaya ganaax, waxaana la filayaa in Igor Zubeldia uu daafaca dhexe kula midoobo Diego Llorente.
Ander Guevara ayaana boojin kara khadka dhexe ee wiilasha macallin Imanol Alguacil.
Dhinaca kale kooxda Barcelona xiddigeeda Jordi Alba waa dhaawac weli waxaana shaki laga galinayaa kooxda martida ah, iyadoo la arki karo Junior Firpo oo sii wadanaya ka ciyaaristiisa booska garabka midig ee daafaca.
Ivan Rakitic ayaa la filayaa inuu heli doono fursad kale oo uu khadka dhexe uga soo muuqdo kaddib qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa ee ugu dambeeyey.
Nelson Semedo ayaa weli ka soo ka banaya dhaawac uu la maqan yahay, taasoo horseedi doonta in Sergi Roberto uu booskiisa daafaca dambe ka sii haysto.
Ansu Fati ayaa la rajaynayaa inuu kursiga keydka ku soo dhoweeyo Antoine Griezmann kaddib saameyntii uu ku yeeshay kulankii Inter ee Talaadadii Champions League markii uu ka soo kacay kursiga keydka.
>- Kooxda Barcelona ayaa guuleysatay todobadii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday naadiga Real Sociedad tartammada oo dhan.
>- Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool siddeed ka mid ah 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka La Liga.
>- Kooxda Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool shan ka mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Real Sociedad tartammada oo dhan.